Hiragasy makotrokotroka : hifandona ny avy any Sahavato sy Ambohimandroso | NewsMada
Hiragasy makotrokotroka : hifandona ny avy any Sahavato sy Ambohimandroso
Miditra amin’ny andro fahatelo sahady ny adin-kiragasy amin’ny “Hiragasy makotrokotroka”, amin’ny alahady izao. Taorian-dry Rakotomandimby Pierre, avy any Morarano Gara, sy Ramilison Besigara Zokiny, avy eny Fenoarivo, ny tariky ry Raedisamimanana, avy any Sahavato A, sy Rasohasimanga Berthine, avy any Ambohimandroso indray no hifampikatroka. Marihina fa, toy ny isan-taona, tontosaina eny Andohalo ny adin-kiragasy rehetra, ankoatra ny tamin’ny fanokafana.
Azo lazaina fa hakotroka sy tsy ho latsa-danja amin’ny teo aloha ity amin’ny alahady ity. Ny samy ngeza no hifandona. Tsara ny mampahatsiahy fa anisan’ireo efa nibata ny fandresana sy nandrombaka ny loka ry zareo avy any Ambohimandroso. Tsy hampivarahontsana ny any Sahavato, efa mpandray anjara amin’ny “Hiragasy makotrokotroka “ anefa izany.
Na eny Andohalo aza no hifamotoana ireo mpankafy hiragasy, mandritra ny “Hiragasy makotrokotroka”, izay tsy hifarana raha tsy ny 16 oktobra izao, hisy ihany ny hampiavaka ity andiany ity. Noho ny fanamarihana ny Andro eran-tany ho an’ny fizahantany mantsy, hotanterahina eny amin’ny kianja Fidasiana, eny amin’ny Rovan’Ambohimanga, ny adin-kiragasy ny 25 septambra izao.